Safal Khabar - होनाहार कलाकार गुमेको वर्ष–२०७५
होनाहार कलाकार गुमेको वर्ष–२०७५
शनिबार, ३० चैत २०७५, १४ : ३२
चितवन – २०७५ साल अब हामीबाट केही घन्टामै बिदा हुँदै छ । २०७६ साल चाँडै नै आउँदैछ । २०७५ साल नेपाली चलचित्र जगतको लागि त्यति राम्रो बन्न सकेन । देशका होनाहार कलाकारलाई हामीले २०७५ सालमा गुमाएका छौँ । बिट मार्नै लागेको २०७५ वर्षले चर्चित कलाकारलाई सँगै लिएर गयो ।
वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापाको जेठ २९ गते ९३ वर्षको उमेरमा काठमाडौं मैतीदेवीस्थित आफ्नै निवासमा निधन भयो । खोटाङको लामिडाँडामा जन्मिएका बृटिश सेनामा भर्ति भएर दोस्रो विश्वयुद्ध समेत लडेका थिए उनी । पछि उनी नेपाली सेनामा कार्यरत रहे ।
रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थापाले सैनिक सेवामा हुँदा नै २०४१ सालमा ‘के घर के डेरा’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका थिए । उनी हाँस्य टेलिसिरियल ‘तीतो सत्यमा काम गरेपछि थप चर्चित बनेका थिए ।
थापा कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाका धर्म बा थिए । दीपाश्रीसँग उनले सिरियल ‘देवीदेखि नै काम गरेका थिए । ‘तीतो सत्यमा उनी दीपाश्रीको बुवाको भूमिकामा देखिन्थे ।
थापाले ५० बढी नेपाली चलचित्र, १ सय बढी टेलिसिरियल तथा १ दर्जन बढी नाटकमा अभिनय गरेका छन् । तर पछिल्लो केही वर्षयता मुटु, फोक्सो, कलेजो लगायतका रोगबाट ग्रसित भएपछि चलचित्र अभिनय कम गरेका थिए ।
चलचित्र क्षेत्रका अग्रज कलाकार बीएस राणाको माघ १८ गते ७६ वर्षको उमेरमा निधन भयो । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएका बीएसको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । २०४१ सालमा ‘अन्याय’बाट चलचित्र क्षेत्रमा होमिएका राणाले १ सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
करोडपति, नेपालीबाबु, कोशेली, दक्षिणा, दुई थोपा आँशु, दासढुंगा, बसन्ती, दाग, साथी म तिम्रो, आई एम सरी, कसले चोर्यो मेरो मन, हवल्दार सुन्तली, काफल पाक्यो, सेतो बाघ, दर्पण छायाँ २ लगायत उनी अभिनित चलचित्र हुन् । हलमा प्रदर्शनरत ‘लभ स्टेशन’मा पनि बीएस छोटो भूमिकामा देखिएका छन् ।
उनले दर्जनौं नाटकमा अभिनय गरेका छन् । जसमध्ये ‘मुक्ति’ उनी अभिनित चर्चित टेलिसिरियल हो । उनी मौलिक अभिनय गर्ने कलाकारका रुपमा लोकप्रिय थिए ।
गणेश न्यौपाने ‘मुनाल’
कलाकार गणेश न्यौपाने ‘मुनाल’को ६८ वर्षको उमेरमा माघ ७ गते निधन भएको हो । दमका रोगी मुनालको काठमाडौंको बौद्ध महांकालस्थित आफ्नै घरमा निधन भयो ।
मुनालले ‘बोल्ड भ्याइस’ र प्रखर अभिनय कलाका कारण चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका थिए । उनले थुप्रै रेडियो तथा स्टेज नाटक, ‘तीतो सत्य’ लगायतका दर्जनौं टेलिसिरियल तथा दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । नारी, दिदीभाइ, नौडाँडा पारी, प्रेमयुद्ध, मिस्टर डन, सेतो बाघ, लभ लभ लभ, घामपानी लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । उनी पछिल्लो पटक माघमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘गोपी’मा छोटो भूमिकामा देखिएका
थिए । हरिप्रसाद रिमाल
यस वर्ष चलचित्र क्षेत्रले गुमाएको अर्का मुर्धन्य व्यक्ति हुन् वरिष्ठ कलाकार, गायक तथा रेडियो नेपालका संस्थापक सदस्य हरिप्रसाद रिमाल । काठमाडौंको लगनटोलमा जन्मिएका रिमालको भदौं १५ गते ९३ वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास काठमाडौं वानेश्वर हाइटमा निधन भयो ।
उनी १४ वर्षको उमेरका बालकृष्ण समको नाटक ‘‘मुकुन्द इन्दिरा’बाट अभिनय यात्रा शुरू गरेका थिए । रिमालले मुनामदन, संयोग, क्रसमा टाँगिएको जिन्दगीजस्ता नाटकमा अभिनय र निर्देशन गरेर ख्याति कमाएका थिए । उनले चलचित्र क्षेत्रमा पनि ख्याति कमाएका थिए । उनले आमा, मनको बाँध, परिवर्तन, के घर के डेरा, सन्तान लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
उनले ‘सपना’ नामक नेपाली चलचित्रको निर्देशन समेत गरेका छन् । रिमाल गायनमा पनि स्थापित नाम हो । रिमालका ‘फगत् एक नजरमा कसैले लियो मन’, ‘विना बादल असिना आउँदैन’ जस्ता गीत निकै चर्चित छन् । उनले रेडियो नेपालमा थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे ।
रामकेशर बोगटीको असोज २३ गते ५८ वर्षको उमेरमा ललितपुरको टिकाथलीमा निधन भएको हो । आफ्नै घर नजिकै रुख काटेको हेर्ने क्रममा बिजुलीको पोलले लागेर उपचारको क्रममा बोगटीको निधन भएको थियो ।
सानैदेखि अभिनयप्रति रुचि राख्ने रामकेशर नाटक हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा होमिएका थिए । दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेका रामकेशरले ‘स्वाभिमान’ र ‘माया गर ल’ नामक चलचित्रको निर्माण गरे । २ वर्षअघि उनी चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा विजयी बनेका थिए ।
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठलाई 'अभिनयकी रानी' भन्ने गरिन्छ । उनको जीवन्त अभिनयले धेरैलाई लोभ्याउने गरेको छ...
‘प्रेम दिवस’ र ‘झट्का’ शुक्रबारबाट एकसाथ प्रदर्शनमा
आज शुक्रबारबाट दुई नयाँ फिल्म एकसाथ प्रदर्शनमा...
मुम्बई पुग्दा दिशासँग पाँच सय थियो
बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानी बोल्ड सिनका कारण...
अमिताभ बच्चनले तिरिदिए किसानहरुको ऋण, अझै अर्को वचन पूरा गर्न बाँकी रहेको भनाइ
बलिउडका वरिष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चनले करिब २१...
१. फागुन वा चैतमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्छ : नेता पौडेल
२. सुमन राव बनिन मिस इन्डिया
३. बुद्धिले काम गरे बुद्धिमानी, मनले काम गरे मनोमानी
४. अत्याधिक गर्मी बढेपछि विद्यालय बन्द
५. पेट्रोल खन्याएर महिला पुलिसलाई जिउँदै जलाइयो
६. मेघ गर्जन तथा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
७. सांसद गगन थापाको प्रश्न : जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के ?
८. २२ दिनदेखि एक बालक बेपत्ता
९. गुठीयारका माग सम्बोधन गर्न सकिने सत्तापक्षका सांसदको भनाइ